Okraina: Ao Amin’ny Twitter Ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2017 18:42 GMT
(Marihina fa tamin'ny 26 Febroary 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Manana kaonty Twitter ofisialy amin'izao fotoana ny Filohan'i Okraina Victor Youshchenko : hita mitsivalana ery ankavanana ny rohin'ny Twitter misy ny vohikala ofisialy [amin'ny teny Okrainiana] (tsy mbola nohavaozina na izany aza ny pejy amin'ny teny Rosiana sy amin'ny teny Anglisy ). Hita ao amin'ny siokan'ny Filoha ny fanambarana ofisialy isan'andro sy ny lahatsoratra an-gazety nivoaka farany izay hita ihany koa ao amin'ny tranonkala ofisialy.
Nanoratra izao manaraka izao momba ny fanokafana ny “birao Twitter” -n'ny Filoha Yushchenko ny mpisera Twitter roxolanus :
Ô ry zalahy a, nipoaka ny Twitter ao Okraina taorian'ny fanambarana androany fa niditra ho mpikambana ao ny filohantsika , ao amin'ny adiresy President_UA
Ary toy izao, taty aoriana kely:
Eny, miova haingana ny fotoana, ry zalahy, na dia ny mpanao politika Okrainiana aza ity mitodika any amin'ny media sosialy ary mandray izany ho fitaovana sy manambara izany amin'ny vaovao.
Ao anatin'ireo sioka roa ireo, nandefa ireo fanehoan-kevitra mikasika ny fahafantaran'ny filoha ny resaka tambajotra sosialy an-tserasera i Kotusenko :
Manontany tena aho hoe nahoana ny @President_UA no tsy manjohy olona na iza na iza ao amin'ny Twitter. Tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra nataon'i Obama izany.
Tamin'io fotoana io, olona miisa 276 no efa nanjohy tao amin'ny kaonty Twitter-n'ny filoha, kanefa tsy mbola nanjohy na iza na iza ny filoha. Na izany aza, iray na roa andro taty aoriana, dia nahitana olona miisa 325 nanjohy ny Filoha Yushchenko ary nanjohy olona miisa 281 izy.
Toa hita tao amin'ny Twitter ihany koa ny mpanao politika Okrainiana fanta-daza iray hafa, dia ny filohan'ny Parlemanta sady Minisitry ny Raharaham-bahiny teo aloha Arseniy Yatsenyuk: na dia tsy nety nanamafy ny fahamarinan'ny kaonty Twitter an'i Yatsenyuk aza ny solontenan'ny sampam-baovaon'ny hetsika ara-politika an'i Yatsenyuk. Manana mpanjohy miisa 714 amin'izao fotoana izao ity mpisera ity, ary manjohy olona miisa 662 ihany koa ny tenany, ​​ary mandray hevitra avy amin'ny olona efa zatra ny tambajotra sosialy mba tsy hitanisana afa-tsy vitsivitsy.
Nivoaka an-tserasera tamin'ny 12 Janoary 2009 ny siokan'ny mpisera Twitter Yatsenyuk voalohany:
Manomboka miomana amin'ny fifidianana aho
Andrasana amin'ny 17 Janoary 2010 ny fifidianana filoham-pirenena Okrainiana manaraka. Tokony natao ny 7 Desambra 2008 ny fifidianana parlemantera tamin'ny voalohany, ary nahemotra ny 14 Desambra nony avy eo, ary nahemotra ho amin'ny daty tsy fantatra amin'ny taona 2009 ny niafarany.
Nanoratra ilay mpisera Twitter Yatsenyuk taorian'ny nanombohan'ny kaonty Twitter an'i Yushchenko
Tsy mahatakatra araka ny tokony ho izy ny hevitry ny teknolojian'ny aterineto ny olona manodidina an'i Victor Andriyovych [Youshchenko]
Tany am-piandohan'ity volana ity, nanoratra momba ny fanafoanana ny kaontiny i Yatsenyuk :
Nisy olona nivazivazy tafahoatra tamiko. Naato ny kaonty. Noho izany, tokony hanaporofo amin'ny servisy teknika hoe iza tokoa aho isika . […]
Misy tokoa ny mpisandoka maro ho mpanao politika Okrainiana ao amin'ny Twitter: maro amin'izy ireo no nandefa sioka vao haingana androany na omaly: yanukovich (praiminisitra teo aloha Victor Yanukovych), chernovetskiy ( Ben'ny Tanànan'i Kyiv Leonid Chernovestsky), lytvyn (filohan'ny parlemanta Volodymyr Lytvyn), BYuT (ny Vondron‘ny Yulia Tymoshenko), Ushenko (Filoha Victor Yushchenko), Viktor_Baloga (Talen'ny kabinetran'ny filoham-pirenena , Victor Baloha).
Toy izao ny fanehoan-kevitry ny mpisera Twitter ruda_gannamanolona ny fanokafana ny kaonty Twitter hosoka an'i Yulia Tymoshenk omaly:
[…] Miady ho an'ny mpifidy izy ireo !!! […] Angamba tokony hamorona mpanao politika virtoaly ihany koa ny tenako?
Rosia 27 Desambra 2021